विष भनी थाहाँ पाइकन खाए के हुन्छ ? एमसीसी त्यही हो : सांसद सुवाल — Bhaktapurpost.com
विष भनी थाहाँ पाइकन खाए के हुन्छ ? एमसीसी त्यही हो : सांसद सुवाल
भक्तपुरपोस्ट संवाददाताभक्तपुर, २५ भदौ २०७८
भक्तपुर, २५ भदौ २०७८
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी विष भएको बताएका छन् । एमसीसी विष भएको र यो सम्झौता गर्नु देशघाती रहेको उनको दावी छ ।
एमसीसी सम्झौता गर्नु नहुने तर्क गर्दै उनले शुक्रवार संसद समक्ष भने, ” विष भनी थाहाँ पाइकन खाए के हुन्छ ? एमसीसी त्यही हो ।” एमसीसी अधिकारीहरुले सय थरी कुरा गर्दै फ़काइरहेको खुलासा गर्दै सांसद सुवालले उनीहरुको कुरामा फस्नु नहुनेमा जोड समेत दिए ।
उनले एमसीसीको बिरोध गर्न शान्तिपूर्ण र्यालीमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तामाथि प्रहरी दमन गरी प्रधानमन्त्री शेर बहादुइर देउवा र गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी सरकारलाई खुशी पार्न खोजेको आरोप लगाए । आफ्ना कार्यकर्ता कृष्णप्रसाद दुमरुको टाउको फुटाएको र दर्जनौ कार्यकर्तालाई गम्भीर घाइते बनाएको बताउदै उनले प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाणलाइ उक्त आरोप लगाएका हुन् ।
उनले विरोध गर्न पाउने जनताको संवैधानिक अधिकारको हनन नगर्न खबरदारी समेत गरेका छन् । ”सडकमा एमसीसीको बिरोध गर्नु नहुने भए नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गर्नु पर्ने हो ?” उनले प्रश्न गरे । सांसद सुवालले एमसीसी पास गर्न खोज्ने दलका नेताहरु अफगानी राष्ट्रपति जस्तै देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने समेत उद्घोष गरे ।
शुक्रवार नेकपा एमालेका सांसदको बिरोध र नाराबाजीका बाबजुद चलेको संसदमा सांसद सुवाल रोष्टममा पुग्न भने पाएनन् । उनले यथास्थानबाट आफ्नो कुरा राखेका थिए ।